new flag ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် မြန်မာစာတွင်ထည့်သင်မည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » new flag ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် မြန်မာစာတွင်ထည့်သင်မည်
new flag ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် မြန်မာစာတွင်ထည့်သင်မည်
Posted by etone on Nov 3, 2010 in News | 18 comments
Meaning of New Flag
နိုင်ငံတော် အလံသစ်အကြောင်းအဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကို လာမည့်နှစ် ဒုတိယတန်းမြန်မာစာ ဖတ်စာတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုမည်ဟုသိရ သည် ။ အချို့သော ဖတ်စာအုပ်များမှာပုံနှိပ်ပြီးဖြစ်သဖြင့် ကြားညှပ်အပိုစာရွက်အဖြစ်ထည့်သွင်းမည်ဟုလည်းသိရသည် ။ သင်ရိုးပြုစုရေးအဖွဲကလည်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်နှင့်ပတ်သတ်၍ လိုအပ်သည်များကို ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရသည်။ နိုင်ငံတော် အလံသစ်လွှင့်တင်သည့် ၂၁ရက်နေ့မှာပင် ယခုခဲ့သို့ ညွှန်ကြားချက်ထွက်လာကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
အလံ အသစ်အကြောင်း မသိသေးတဲ့ လူတွေ ဒုတိယတန်း ဆင်းပြီး ပြန်သင်သင့်တာပေါ့နော်..
ဒါဆိုရင်တော့ သေချာပြီ ဒုတယတန်းပြန်ဆင်းရတော့မယ်ထင်ပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ အလံသစ်ဆိုတာကြီးကို စိတ်လဲ မ0င်စားသလို သိလဲမသိချင်ပါဘူး .. (အလကားလျောက်ပြောနေတာသိသိကြီးကို :p)
ဒုတိယတန်း မဆင်းချင်ရင် ခေတ်မမှီဘဲ နေမှာပေါ့.. ခေတ်နဲ့ အညီ.. သိသင့်တာ သိဖို့ ကျောင်းပြန်တက်ကြစို့..
etone ရဲ့ ဖျတ်ညှပ်ကပ် တွေခိုးတာကတော့စပြီ။ ဒီသတင်းက http://www.yatanarpon.com.mm မှာတင်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပြီအခုလို ဘာမှ source ကိုမပြောဘဲဒဲ့ယူနေတာတော့ မကောင်းဘူးလို့မြင်မိပါတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားအခုလိုဖျတ်ညှပ်ကပ်တွေနဲ့ ၁သိန်းလဲထုတ်ပြီးသွားပြီးနောက်တစ်ခုထုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာလားဗျာ။
ဟိတ်ကောင် မင်းလည်း ဘလိုင်းကြီးလာခွပ်နေပါလား။
မင်းဖတ်ဖူးတဲ့အဲ့ဒီ ဆိုက်တစ်ခုထဲမှာပဲ အဲ့ဒီသတင်းက တင်သလားကွ ။ ပြောရရင် မကောင်းဘူးဖြစ်တော့မယ် ။ အဲ့ဒီဆိုက် address တောင်မင်းဆီက သိလို့အခုတင်ဖွင့်ကြည့်မိတာ ။ အဲ့ဒီသတင်းအကြောင်းရေးထားတဲ့ပြည်တွင်းရော၊ ပြည်ပ မီဒီယာဆိုက် ငါးခုထက်မနည်းရှိတယ် ။ ဒဲ့ယူနေတယ်ဆိုတာကလည်း ပါသေးတယ် ။ စွပ်စွဲလှချည်လား ငါရေးထားတာ အကြောင်းရာတူချင်တူမယ် ချွတ်စွပ်စာဖြစ်နေလို့လား ။ စိတ်ဓါတ်က အောက်တန်းမကျချင်ပါနဲ့ကွာ ကလေးအတွေးတွေလာပြောမနေနဲ့ ။ မက်လောက်စရာမရှိတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု 100တန်ကို ငါက အင်တာနက်သုံးတဲ့ဖိုးတောင်မကျေပဲဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်စရာလား။ သိပ်လိုချင်လွန်းလို့ရေးနေတယ် မထင်နဲ့ အမြဲတမ်းဝင်ကြည့်နေတဲ့ ဆိုက်ဖြစ်လို့ သံယောဇဉ်ဖြစ်ပြီးရေးနေတာ နားလည်လား ။
သူခိုးထားတဲ့သတင်းအပြည့်အစုံကိုအထက်ပါ link တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မနာလိုမရှူစိတ်က လူကိုပူလောင်စေတယ်လေ ။ ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်ပဲ ။
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား စိတ်ကောင်းကောင်းထားပြီး ဆေးမှန်မှန်သောက်နေရင် လောကကြီးက သာယာတယ် ။ ပြောလိုက်ဦးမယ် သတင်းတွေကို အင်တာနက်ဆိုက်ထဲကရတာတွေပဲမထင်နဲ့ ငါ့အစ်ကိုကလည်း ပြည်တွင်းနာမည်ရဂျာနယ်သုံးခုမှာရေးနေတဲ့ ဂျာနယ်လစ်ကွ ။ တချို့သတင်းတွေဂျာနယ်ထဲမပါခင်တောင် ငါရေးဖူးတယ် …. ထုတ်လုပ်သူတွေငိုသွားမှာစိုးလို့ လျှော့ထားတာ ။
အမှတ်တမဲ့နဲ့ ..လေထဲမှာလွင့်နေတဲ့ အလံသစ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်.. အရူးမထမိန်ကြီး.. တက်ချိတ်ထားသလားအောင့်မေ့ရတယ်. . တချို့ကလဲပြောပါတယ်.. မီးပွိုင့်နဲ့မှားလာတာတဲ့..
အပြာရောင် သည်ကတိသစ္စာတည်ကြည်ခြင်းလို့တော့စာထဲမှာသင်ခဲ့ဘူးတယ်။ အခုအလံသစ်က အပြာရောင် ပျောက်သွားတော့ ကတိသစ္စာဆိုတာတွေလဲမရှိတော့တဲ့သဘောလား မသိ…
I am from Yangon. says:
မြန်မာနိုိင်ငံ အလံသစ်၏ အဓိပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်..
အဝါရောင် သာသနာ ကိုယ်စားပြုပြီး
ကြယ်ကစစ်တပ်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး …စစ်တပ် က ရက်ရက် စက်စက် နှိမ်းနင်းလိုက်တဲ့အတွက် အနီရောင်သွေးစက်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာပါပဲ..
အကြီးရော ၊ အငယ်ရော တော်ကြတော့ ။ မင့်တို့ မို့ လို့အရေမရ ၊ အဖတ်မရ နဲ့။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အရိုအသေ ပေးချင်ရင်ပေး ၊ မပေးချင်ရင် ဒီအတိုင်းနေရုံပေါ့ ။
ကြည့်မကောင်းတာတော့အမှန်ပဲ။ဒါနဲ့ မသိလို့မေးရအုံးမယ် ရုပ်ရှင်ရုံမှာရော အလံချိန်းလိုက်ပြီလားဟင် .. ။
အလံချိန်းမချိန်းတော့ မသိဘူးတင်တဲ့ သူတော့ ပဒေါင်းချိန်းနေလောက်ပြီ။
်လိုက်လားမသိပါဘူး။အလေးပြုတဲ့ သူကလည်းပြုနေတာပဲ။ထမီကလည်းကြယ်ကွက်ကြီးနဲ့ ကြယ်ကလည်းပြူးနေတာပဲ။
ရုပ်ရှင်ရုံ မရောက်တာ ကြာလို့ သိဝူးကွဲ့.. သိတဲ့ လူကို မေးကြည့်
သေချာတာက http://www.mip.gov.mm/successform.aspx >>> http://www.mip.gov.mm/normaldform.aspx ဒီမှာမပြောင်းရသေးဘူး မေ့နေတာလား ကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်လို့ လုပ်ပေးမယ့်သူစောင့်နေကြလားမသိပါဘူး
ကောင်လေး ရယ်.. ဒေါသမကြီးပါနဲ့.. လူဆိုတာ တယောက်နဲ့ တယောက် အမြင်ချင်း မတူကြဘူးလေ.. လက်တောင် အတို အရှည် ရှိတာဘဲ.. မင်းဘက်က လက်ဝါးမြင်ပေမဲ့ သူက လက်ဖမိုး မြင်နေတာလေ.. မတူညီတဲ့ အမြင်တွေကြောင့် ရန်မီး တွေ မဖြစ်စေချင်ဘူး.. အားလုံး အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီဆိုက်ကို အိတုန်လည်း မပိုင်ဘူး ဆူးလည်း မပိုင်ဘူး ကောင်လေးလည်း ပိုင်တယ်လို့ မထင်ဘူး နော်.. အားလုံးက မန်ဘာတွေ ကြီးဘဲ.. ပြောရရင် အဆင့်တူတူတွေ ဘဲလေ.. အချင်းများပြီး ရန်မများစေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ပြောတာပါ.. အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ။